STUDY ABROAD မှကြီးမှူးကျင်းပမည့် PSB Academy ၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီး - STUDY ABROAD Information Centre
STUDY ABROAD Information Centre
James Cook University Singapore (JCUS)
STUDY ABROAD မှကြီးမှူးကျင်းပမည့် PSB Academy ၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီး
PSB Academy ၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီးကို STUDY ABROAD Information Centre မှကြီးမှူးပြီး ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် ကျင်းပပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
(၁) PSB Academy ၏ One to One Counselling Section ကို နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်(သောကြာနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀) မှ ညနေ (၅း၀၀) အထိ ရန်ကုန်မြို့ STUDY ABROAD ဒိုင်းမွန်းရုံးခန်းတွင် လည်းကောင်း၊
(၂) PSB Seminar အား နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်(စနေနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၅း၀၀) နာရီ အထိ မန္တလေးမြို့ Swan Hotel တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
PSB Academy သည် (၂၀၁၁/၂၀၁၂) ခုနှစ်၏ Asia One People’s Choice Awards (Best Private School) ဆုကို ရရှိထားသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသော Private Education တစ်ခုဖြစ်ပြီး TUV SUD Group ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
PSB Academy သည် Australia ရှိနာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်များ ဖြစ်ကြသော University of Newcastle, University of Wollongong တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး UK ရှိ Manchester Metropolitan University တို့နှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။
PSB Academy တွင် Business, Communication, Engineering, Information Technology, Tourism & Hospitality Management စသည့်ဘာသာရပ်များအားလည်း ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို အထူးပြုလေ့လာသင်ယူကြမည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အတွက်လည်း
လက်တွေ့ခန်းများ စနစ်တကျ စီစဉ် ထားရှိပေးရုံသာမက Indoor Gymnasium, Football Court, Book Store အစရှိသည် တို့ကိုပါ အပြည့်အ၀ စီစဉ် ပေးထားပါသည်။
၀င်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ အနေနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် (သို့) GCE ‘O’ Level ဖြေဆို ပြီးသူ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ လိုအပ်ချက် အနေနှင့် IELTS Band (5.5) (သို့) TOEFL (550) ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပြပွဲနေ့တွင် ကျောင်းလျှောက်မည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတိုင်းအား Application Fees ကိုကင်းလွတ်ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူး အစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့်လည်း “Welcome Pack” အားပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား များအနေနှင့် STUDY ABROAD Information Centre တိုက် (အေ)၊ (၁၁ လွှာ)၊ အခန်းအမှတ် (၁၁၀၃) ၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို၊ ပြည်လမ်း (မေတ္တာဦးဆေးခန်း အနီး) ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၀၉ ၅၁၅၁ ၀၀၈၊ ၀၉ ၇၃ ၂၄၂၄ ၀၄ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
STUDY ABROAD Information Centre has helped many Myanmar students to continue their education at world-wide institutions.
We STUDY ABROAD guides students for Education to achieve quality education with better career prospectus.
Shoot us an email with your feedback:
© 2015 STUDY ABROAD Information Centre. All rights reserved.﻿